Onye na -emepụta ihe na -ebubata akpa akpa CCMIE
Oke ikike ibuli elu 37t nwere akwa abụọ
Oke kacha arụ ọrụ bụ 4m
Oge imegharị ọrụ ≤10min
Oke nrụgide nke sistemụ hydraulic: 28MPa
Isi ọrụ Ibufe na ibutu ihe, nnyefe ụgbọ ala
Tinye maka akpa 20ft, akpa 40ft
Ike mmanụ tankị: 304L
N'oge ugbu a, enwere ụdị ụzọ ụgbọ njem dị n'okwu ahụ, mana ihe ọ bụla ịchọrọ ibuga, ị ka nwere mkpa akọwapụtara nke chọrọ azịza kwesịrị ekwesị nke nwere ike iwetara gị ezigbo ihe bara uru n'oge usoro ọrụ gị. N'ịdabere n'ihe a chọrọ, anyị CCMIE na XCMG mepụtara ọtụtụ trailers na cranes, gwongworo na cranes nke nwere ike dabara ihe ị chọrọ n'ụzọ dị mfe, dịka mkpa gị siri dị na nke na -eme ka teknụzụ dị elu na -edozi mkpa gị ngwa ngwa. Emebere trailers na gwongworo anyị n'ụzọ pụrụ iche ma jikọta ya na kranes anyị, zute arịrịọ gị niile.
Anyị bụ ndị ọrụ zuru oke maka imeju mkpa njem niile nke ndị ahịa na ịkpakọba ihe; anyị nwere olile anya na anyị ga -enweta nkwalite ngwaahịa anyị na -aga n'ihu site n'ịkwalite uto nke oke azụmaahịa ndị ahịa; bụrụ onye mmekọ na -adịgide adịgide nke onye ahịa iji nyere ndị ahịa aka ịbawanye uru ha. China shore crane container spreader mobile port crane container lifter spreader na -ebuli ibu ebuli ụwa, anyị na -anabata ndị ahịa na ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile ịkpọtụrụ anyị maka mmekọrịta na ụlọ ọrụ na -abịa. Ngwaahịa anyị kacha mma, Ọrụ a bụ ọkaibe. Otu nhọrọ, dị mma mgbe niile!
Igwe na-ebuli akpa China dị elu, ogo pụrụ iche na-esite na njikwa mma nke nkọwa niile, afọ ojuju ndị ahịa bụ n'ihi nraranye sitere n'obi. Ịdabere na teknụzụ dị elu na aha ụlọ ọrụ na -arụkọ ọrụ ọnụ, anyị na -eme ike anyị niile iji nye ndị ahịa azịza na ọrụ ka mma, ma dị njikere iwusi mgbanwe na imekọ ihe ọnụ nke ọma na ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ iji mepụta ọdịnihu ka mma.
Ịkpachara anya ọrụ
Oghere na -arụ ọrụ nke akụrụngwa na -ebuli ihu na akụrụngwa na -ebuli elu kwesịrị ịbụ otu. Mgbe nnukwu ihe dị iche mere, kwụsị otu ngwa na -ebuli elu ma rụọ ọrụ nke ọzọ na -ebuli ihe, mezie ha iji mee ka ngwa mbuli ihu dị ka ọrụ mbuli azụ, wee rụọ ya n'otu oge ọzọ.
N'oge ị na -ebuli elu, gbaa mbọ hụ na onye na -ebuli ya na -eme nke ọma ma kwụsie ike, ma ọ bụrụ na a na -ebuli akpa ahụ ka ọ na -arụ ọrụ na mberede, kwụsị ọrụ ahụ ozugbo, malitegharịa ọrụ ahụ ka ọ dajụrụ.
Nke gara aga: Ụgbọ ala na -eburu akụkụ
Osote: Onye na -adọkpụ akpa ihe nkiri
Ụgbọ ala na -ebu ihe
Ihe mkpuchi 6 Ihe ngwongwo na-enweghị ihe na-erute stacker-ZHRS100-6
Onye na -ebu akụkụ akpa